Barreessaa LibreOffice dhaaf qabduuwwan qaxxaamuraa
Akka hojii waliinii atataamaan hojeechuuf, qabduuwwan qaxxaamuraa LibreOffice keessaa fayyadamuu nidandeessa. Kutaan kun qabduuwwan qaxxaamuraa durtii, Barreessaa LibreOffice dhaaf tarreesa.
Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.
Akkasumaas, qabduuwwan qaxxaamuraa waliigalaa keessaa LibreOfficefayyadamuu nidandeessa.
Goodayyaa itti aanuu fili
Mul'anno Madda Deetaa Bani
Naanna'aan Banaa dha, gara lakkoofsa fuuleetti deemi
Gaaddiddeessaan dirree banaa / dhamaa
Haalata dheertoo dabaalataa
Haalata filannoo garee
Naqa Dirreewwaniif tarroota haaromsi
Arfiile Maxxansalaa banaa/dhaamaa
Saanduqa Haalataa akka fayyadamtu xiyyeeffannoo laata
Lakkaawwiin banaa dha
Gabatee saagi yk gulaali
Rasaasii banaa dha
Lakkaawwii / Rasaasii dhamaa dha
Barbaadiitii Bakka buusi
Gochaa dhumaa Irra deebi'i
Ajaja Ctrl+0 (zero)
Haalataa keewwata Mataduree 1 fayyadami
Haalataa keewwata Mataduree 2 fayyadami
Haalataa keewwata Mataduree 3 fayyadami
Barruu filatamee heeregee gatii gabatee muraatti garagalcha.
Ajaja Ctrl+Shift+minus sign (-)
Ajaja Ctrl+mallattoo bayissaa * (yaadannoo lakkoofsa irratti qofa)
Dirree Maakroo kaasa
Iddoowwan duwwaalaa. Yoo barruun qixxatee, iddoowwan duwwaalaa murfisaaf hinfayyadu, akkasuumas
Cita sararaa jijjiiraa keewwataa malee
Kutaa fuula hujeekaa
muraa tarjaa barruuwwan tarjeessaa hedduu keessaa
Qaree bitaat siqsi
Filannoo bitaatti waliin qaree siqsi
Dirqali Alt+Qabduuwwan xiyyaa
Gara jecha jalqaabatti deem
Dirqala Alt+Furtalee Xiyyaa
Jecha jechaan bitaatti filuu
Qaree mirgatti siqsi
Filannoo mirgatti waliin qaree siqsi
Gara jalqaba jecha ittaanuu deemi
Jecha jechaan mirgatti filuu
Qaree sarara tokko ol siqsi
Gara qixxa ol keessaatti sararoota filuu
Qaree gara jalqaba keewwata darbeetti siqsi
Hanga jalqaba keewwatatti fili. Tuqiinsi furtuu ittaanu filannoo hanga jalqaba keewwata ittaanuu babal'isa
Qaree sarara tokko gad siqsi
Gara qixxa gadii keessaatti sararoota filuu
Hanga dhuma keewwatatti fili. Tuqiinsi furtuu ittaanu filannoo hanga dhuma keewwata ittaanuutti babal'isa
Gara sarara jalqaabatti deem
Gara jalqaaba sararaa deemiitti filadhu
Gara dhuma sararatti deemi
Gara dhuma sararaa deemiitti filadhu
Gara ka'uumsa galmeetti deem
Barruu ka'uumsa galmee irraa deemiitti filadhu
Gara dhuma galmeetti deem
Barruu dhuma galmee irraa deemiitti filadhu
Jijjiirraa qaree barruuf irraantoo giduutti
Jijjiirraa qaree barruuf jalaantoo giduutti
Haalataan saagu banaa/dhamaa
Argii fuulaa filannoon ol siqsi
Argii fuulaa gad siqsi
Argii fuulaa filannoon gad siqsi
Barruu dhuma jechaa irratti haqi
Barruu jalqaba jechaa haqi
Tarree keessaa: keewwata duwwaa fuulee keewwata ammee keessaa haqi
Barruu dhuma himaa irraatti haqi
Barruu jalqaaba himaa irraatti haqi
Yaddii itti aanuu Guutummaa Jechaa Ofumaa waliinii
Yadda duraanii, Guutummaa Jechaa Ofumaa waliin fayyadami
Qabiyyee gabatee muraa maxxansi.
Qaxxaamura Furtuulee Kewwattaaf Sadarkaa Matadureef.
Ajaja+Dirqala Ctrl+Alt+Xiyyaa Olee
Keewwata ka'aa yk keewwata filatamee keewwata tokko ol siqsi.
Ajaja+Dirqala Ctrl+Alt+Xiyyaa Gadii
Keewwata ka'aa yk keewwata filatamee keewwata tokko gad siqsi.
Matadureen dhangii "Mataduree X" (X = 1-9) toorii irraa sadarkaa tokkoo gaddi bu'ii.
Mataduren dhangichaa irraa "Heading X" (X = 2-10) tiirii irraa sadarkaa tokkoo oll ba'erraa.
Bakka jalqabaa mataduree tokko irraa: Dhabduu caancalaa saaga. Taliigaa Foddaa fayyadaaa jirurratti hunda'uun, DirqalaAlt+Tab fayyadamuun ni danda'ama.
Gabatee cuqoon sadarkaa mataduree jijjiiruuf, jalqaba qubannoo qaree fulee matadureetti siqsi.
Gabateewwan Barreessaa LibreOffice keessatiif qabduuwwan qaxxaamuraa
Yoo man'ee ka'aan duwaa tahe: Gabatee mara fila. Kana tahuu bannaan: Qabiyee manee ka'aa fila. Lamuu gad dhibuun gabatee mara fila.
Yoo manee ka'aan duwaa tahe: Gara dhumaa gabateetti dema. Kana tahuu bannaan: Dhiibuun duraa gara manee ka'aatti dema, dhibaan lamattaa gara gabatee ammatti dema, dhibaan sadaffaan gara jalqaba galmeetti dema.
Manee ka'aan duwaa yoo tahe: Gara dhuma gabateetti dema. Kana tahuu bannaan: Dhibaan duraa gara manee ka'aatti dema, dhibaan lamattaa gara gabatee ammaatti dema, dhibaan sadaffaan gara jalqaba galmeetti dema.
Dhaabduu caancalaa saaga (gabatee keessatti qofa). Taliigaa Foddaa fayyadaaa jirurratti hunda'uun, DirqalaAlt+Tab fayyadamuun ni danda'ama.
Hamamtaa tarjaa/tarree mirga/jala irraa hamamtaa qaree manee irraa dabala/hir'isa
Hamamtaa tarjaa/tarree bitaa/ol irraa hamamtaa qaree manee irraa dabala/hir'isa
Dirqala+Ajaja Alt+Ctrl+Furtuulee Xiyya
Akka dirqalaatii Alt, garuu, man'ee ka'aa qofaatu fooyya'a
Dirqala+Ajaja Ctrl+Alt+Shift+Furtuulee Xiyya
Gabatee filatamee irraa hayyisa man'ee haqi. Yoo gabateen filataame hinjiranee, gabateewwan galmee keessaa mara irraa hayyisaan man'ee haqameera jechuudha.
Mannen hundumaa fillatamuu bannan, barruu qaree irraa dhumaa gallee irraa baduu.Qarren dhumaa manee irraa yoo jirattee,Akkasumaas manneen duwwaan hin fillataminee.Qabbiyyeen manee issaa itti aanuu baderraaa.
Yoo maneen tokko yk lama filatamee, tarreen hundiinuu filannoo of keessaa qaban hinhaqamu, yoo tarreen guutuuman yk walakkaan filatamee, guutuumaan gabatee ni haqamu.
Goodayyaawwan, Saxaatoo, Wantawwan Siqsuu yk Hagamtaa Jijjiiruudhaaf, Furtuuwwan Qaxxaamuraa
Qareen goodayyaa barruu keessa jira, garuu barruun hinfilatamne: Cufiinsii (Escape) goodayyaa barruu fila.
Barruun goodayyaa filatamera: Cufiinsii (Escape), qaree barruu goodayyaa irraa haqa.
F2 yk Saagi yk qabduun kamiyuu, argii irratti arfii oomishu
Yoo goodayyaan barruun filatamee: qaree, goodayyaa barruu keessaa, gara xumuura barruutti qubachiisa. Yoo qabduu kamiyuu warra argii irratti arfii oomishan dhiibdee, galmichii halataa gulaaluu keessa jiraatee, arfichii barruuf miiltoo taha.
Xiyyoo gadii mirgaatti sochosudhaan hammamtaa jijjiira.
Dirqala+Ajaja Alt+Ctrl+Shift+Furtalee Xiyyaa
Xiyyoo gubaa bittaatti sochosudhaan hammamtaa jijjiira.
Korkoddii kan wanta filaata (haalata tuqaalee keessa gulaali).
Gabateecuqootiin Naanna'uu fi Filuu
Furtuuwwan qaxxamuraa(Barreeessaa LibreOffice Saaqqatinaa)
Qaxxaamuroota (LibreOffice Gaheenya)
Title is: Barreessaa %PRODUCTNAME dhaaf qabduuwwan qaxxaamuraa